अर्थ सहित व्हाट्सएप इमोजिस र इमोटिकन्स - EmojisWiki.com
गतिविधि र खेलकुद
अर्थ संग WhatsApp Emojis र इमोटिकन्स
इमोटिकनहरू सन् 1990 मा सिर्जना गरिएका थिए र डिजिटल मिडिया प्रयोग गरेर मानिसहरूले सञ्चार गर्ने तरिकालाई परिवर्तन गर्ने एउटा ठूलो कदम थियो। तिनीहरूको उत्पत्तिदेखि नै तिनीहरूले विचारहरूलाई अझ राम्रो अर्थ दिन र तपाईंलाई आफ्नो भावना वा भावनाहरूलाई फराकिलो रूपमा व्यक्त गर्न अनुमति दिन मद्दत गरेका छन्।
¿के तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंले आफ्नो डिजिटल किबोर्डमा सयौं इमोजीहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ?? यसले स्वाभाविक रूपमा प्रतीकहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दछ जुन लामो समयसम्म केही अभिव्यक्तिहरू जस्तै मुस्कान, हृदय वा ठूलो हाँसोको प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरिएको थियो। यी अनन्त अभिव्यक्तिहरू भएका साना अनुहारहरू हुन्।
माथिको कारणले गर्दा, यस लेखमा हामी तिनीहरूको अर्थको साथ इमोटिकनहरूको सूचीको विवरण दिन्छौं, तपाईंले इमोजीहरू के हो, तिनीहरू केका लागि प्रयोग गरिन्छ, जुन सबैभन्दा लोकप्रिय र अधिक छन् भनेर थाहा पाउनुहुनेछ।
व्हाट्सएप र फेसबुक को लागि कोटिहरु द्वारा अर्थ संग इमोजी र इमोटिकन को सूची
अर्थ संग WhatsApp खाना र पेय इमोजिस र इमोटिकन्स
अर्थको साथ व्हाट्सएप प्रतीकहरूको इमोजिस र इमोटिकनहरू
व्हाट्सएप पशु इमोजिस र अर्थ संग इमोटिकन्स
व्हाट्सएप गतिविधि र खेल इमोजिस र अर्थ संग इमोटिकन्स
अर्थको साथ व्हाट्सएप वस्तुहरूको इमोजिस र इमोटिकनहरू
व्हाट्सएप यात्रा र स्थान इमोजिस र अर्थ संग इमोटिकन्स
व्हाट्सएप मान्छे इमोजिस र अर्थ संग इमोटिकन्स
इमोटिकन्स वा इमोजीहरू के हुन्?
इमोटिकनहरू राज्यहरूमा प्रयोग गरिएका क्यारेक्टरहरू वा इलेक्ट्रोनिक सन्देशहरू र Instagram, WhatsApp वा Facebook जस्ता अनलाइन प्लेटफर्महरूसँग सम्बन्धित छन् जसले मानव भावनाहरू, इच्छाहरू, विचारहरू वा भावनाहरूलाई दृश्यात्मक रूपमा फरक तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्दछ।
हामीले सुरुमा संकेत गरे जस्तै यसको उत्पत्ति जापानी हो र यसको शब्द 絵⽂字 को रूपमा लेखिएको छ जुन अक्षर "e" र शब्द "moji" मिलेर बनेको छ। यी यति लोकप्रिय भएका छन् कि कतिपय एकेडेमीहरूले पनि तिनीहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् वर्षको शब्द एन 2015।
यी दृश्य प्रस्तुतिहरूको सिर्जना मुख्यतया शिगेताका कुरितालाई दिइएको छ। यसका लागि धन्यवाद, समयका प्रयोगकर्ताहरूले सन्देशहरूले अनुमति दिएका 160 क्यारेक्टरहरूमा तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर सम्पूर्ण परिस्थितिहरू प्रतिनिधित्व गरे।
मूल रूपमा एउटा इमोजी १२ x १२ को आयामहरूमा सीमित थियो पिक्सेल मुख्यतया समयको ग्राफिक प्रविधिहरूको सीमितताको कारणले। यी दृश्य प्रतिनिधित्वहरू प्रतिलिपि अधिकारको अधीनमा नभएकोले, धेरै जापानी विक्रेताहरूले आफ्नै छविहरू सिर्जना गर्ने अवसर लिए।
माथिका लागि धन्यवाद, आज यी प्रतीकहरू धेरै पटक प्रयोग गरिन्छ र कुनै सन्देश लेख्दा ठूलो मद्दत गर्दछ।
तिनीहरू WhatsApp र Facebook मा के को लागी प्रयोग गरिन्छ?
इमोजीहरू मूल रूपमा पाठ सन्देशहरूमा ग्राफिक रूपमा केही भावनाहरू प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरिएको थियो। तर, आजको प्राविधिक परिवर्तनसँगै, विभिन्न विषयका अवधारणाहरू समावेश गर्नुहोस् तपाईलाई विभिन्न वास्तविक जीवन परिस्थितिहरू सबै भन्दा राम्रो तरिकाले संकेत गर्नको लागि।
राज्यहरूमा व्हाट्सएप, फेसबुक र इन्स्टाग्राम धेरै उपयोगी छन्, साथै तपाइँका लागि सबै च्याटहरूमा खुशी, चासो, आशा, प्रेम, गर्व, निर्ममता, कृतज्ञता, प्रेरणा, गर्व र अन्य धेरै जस्ता भावनाहरू संकेत गर्न। तिनीहरूले तपाईंलाई खुशी, माया, करुणा, आश्चर्य, हास्य, उदासी, रिस, लगायतका भावनाहरू व्यक्त गर्ने सुविधा पनि दिन्छन्।
माथिको उदाहरणको रूपमा, तपाईंले आफ्नो डिजिटल किबोर्डमा देखा पर्ने अनुहारहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं कुनै कारणले गहिरो उदासी महसुस गर्नुहुन्छ भनेर प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो आनन्दका क्षणहरू संकेत गर्न सजिलो बनाउँछन् वा तपाईंको मूडमा परिवर्तन।
यी पिक्टोग्रामहरूले तपाईंलाई व्यक्त गर्न चाहने शब्दहरूको संख्या कम गर्न मद्दत गर्दछ, जस्तै हिड्ने, किनमेल गर्ने, सुत्ने, स्वादिष्ट परिकार खाने आदि।
फेसबुक र व्हाट्सएपको राज्यहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने इमोजी वा इमोटिकनहरू के हुन्?
यहाँ हामी व्हाट्सएप र फेसबुक स्टेटस र इन्स्टाग्रामका लागि पनि केहि सामान्य इमोजीहरू प्रस्तुत गर्दछौं।
यदि तपाइँ कसैको लागि माया महसुस गर्नुहुन्छ, तपाइँ रोमान्टिक हुन चाहनुहुन्छ वा तपाइँ कसैको सौन्दर्य वा केहि चीजबाट चकित हुनुहुन्छ भने, तपाइँ प्रेम इमोटिकन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आँखामा दुई मुटु भएको खुसी अनुहारलाई चित्रण गरिएको छ।
सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने प्रतीकहरू मध्ये अर्को डराउने वा चिच्याउने इमोजी हो।, यो एक अचम्मको अनुहार हो जसले डर वा त्रासलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र तपाइँ यसलाई प्रभाव वा प्रभाव व्यक्त गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
आँखा झिम्काउने इमोजीले समकक्षलाई संकेत गर्ने सबैभन्दा शरारती तरिकाहरू मध्ये एक हो जुन तपाईं कुनै कुराको सहयोगी हुनुपर्दछ वा तिनीहरूलाई खेलमा निम्तो दिनुहोस्।
यदि तपाई दु:ख व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यहाँ एक रोएको अनुहार छ जसले यसलाई सजिलै व्यक्त गर्दछ। यो गहिरो चिन्ता हो र तपाईंलाई सबैभन्दा कठिन क्षणहरूमा मद्दत गर्न सक्छ।
कुनै कार्य वा अरूको विचारमा सम्झौता, अनुमोदन वा सहमति संकेत गर्न थम्ब्स अप उपयोगी छ।
तपाईले इमोजी वा अविश्वसनीय अनुहार पनि फेला पार्नुहुन्छ तेस्रो पक्षहरूले उठाएको विचारको बारेमा शंका व्यक्त गर्न धेरै उपयोगी। यो अविश्वासको अनुहार द्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको छ, आराम पलकहरु संग।
हाँसो वा आनन्दको आँसुको साथ प्रतीक पनि लोकप्रिय छ किनभने यसले तपाईंलाई चरम खुशी, हाँसो व्यक्त गर्न मद्दत गर्दछ वा संकेत गर्दछ कि तपाईं कुनै कुराको बारेमा हाँस्न रोक्न सक्नुहुन्न। तपाइँ यसलाई सजिलैसँग यसको मुस्कान अनुहारबाट दुई थोपा, प्रत्येक आँखामा एक थोपा द्वारा पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ।
सबैभन्दा लोकप्रिय पिक्टोग्राम मध्ये अर्को हृदय चुम्बन को अनुहार हो। यो एक अनुहार हो जसले चुम्बन पठाउँछ र यो मायालु छवि हो जसले कसैलाई राम्रो महसुस गराउन सक्छ।
फ्लामेन्को नर्तक एक प्रतीक हो जसले पार्टीमा जाने इच्छालाई सञ्चार गर्दछ। तपाइँ यसलाई केहि घण्टाको लागि तपाइँको घर छोड्न र राम्रो समय बिताउन चाहानुहुन्छ भनेर संकेत गर्न यसलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
इमोटिकन्स वा इमोजिसको सही अर्थ जान्न किन महत्त्वपूर्ण छ?
कहिलेकाहीँ मानिसहरूले गलत तरिकाले इमोजिसको अर्थ साझा गर्छन्, या त जानकारीको कमीको कारणले वा सांस्कृतिक वातावरणले उनीहरूलाई लामो समयदेखि फरक प्रयोग दिएको कारणले गर्दा उनीहरूले असमानता अपनाउन सक्छन्।
सत्य यो हो कि प्रत्येक इमोटिकनको आधिकारिक नाम छ तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्नुहुने वातावरणमा यसलाई अर्थ दिनको लागि यो सुरूवात बिन्दु हो, अन्यथा, त्यहाँ गलतफहमीहरू हुन सक्छ र त्यो सानो अनुहारको अर्थ के हो भनेर बुझ्न नसक्दा कष्टप्रद, असहज वा लाजमर्दो पनि हुनेछ।
उदाहरणका लागि, त्यहाँ केही प्रतिनिधित्वहरू छन् जसले चिनियाँ हितोपदेशहरू जस्तै तीन बाँदरहरू चित्रण गर्दछ। यसको अर्थ हेर नो इभिल, हियर नो इभिल, स्पिक नो इभिल, र तैपनि मानिसहरूले व्यक्तिगत रूपमा यी अनुहारहरू शोक, एक नजर, वा गोप्य राख्नको लागि प्रयोग गर्छन्।
को प्रतीक खरायो कान भएका महिलाहरू कामुकताको पर्यायवाची हुन्, तर मानिसहरूले प्राय: यो इमोजीलाई रमाइलो, उत्साह, वा खुशीको संकेत दिन प्रयोग गर्छन्। यो विशेष गरी साथीहरू वा साथीहरूको समूहहरूमा र फेसबुक, इन्स्टाग्राम वा व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू समावेश गर्दछ।
जब यो रोएको, आश्चर्य वा डरको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा आउँछ, मानिसहरूले सामान्यतया आफ्नो गालामा हात राखेर अनुहारको इमोजी प्रयोग गर्छन्। यद्यपि, यो प्रतीक प्रसिद्ध एडवर्ड Munch को काम संग सम्बन्धित छ।
तपाईंले मलमूत्र प्रतीक पनि फेला पार्नुहुन्छ, जुन कहिलेकाहीँ मलाई चकलेट आइसक्रिम भएको बहाना गर्दछ। सत्य यो हो यसको सिर्जना जापानी संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ र राम्रो भाग्य को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
हामीले अघिल्लो उदाहरणहरूमा व्याख्या गरेझैं, प्रत्येक इमोटिकनको आफ्नै अर्थ हुन्छ, यद्यपि धेरै मानिसहरूले यसलाई आफ्नै दिन्छन्। तर यो सँधै महत्त्वपूर्ण छ कि तिनीहरूलाई इंगित गर्न को लागी यो हुनुपर्दछ कि संचार अधिक तरल छ र सन्देशहरु को गलत अर्थ छैन।
© 2022 EmojisWiki.com · सबै अधिकार सुरक्षितकुकीहरू नीति हामी को हौं?